Xasan Cali Kheyre: isku day dil ayaan ka badbaadnay – Kalfadhi
February 19, 2021 Hassan Istiila
Mudada xilheynta madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo afar sano ahayd ayaa ku ekeyd 8dii February. Mucaaradku waxay sheegeen inaysan madaxweynaha aqoonsaneyn. Dowladdu se waxay sheegtay in madaxweynahu xilka heyn doono ilaa inta laga dooranayo maamul cusub. Ma jiro waqti la og yahay oo ay doorashadu dhici doonto. BBC Somali ayaa warbixinta markii hore lagu daabacay.
Ra’iisul Wasaare Rooble oo ka hadlay rabshadihii ka dhacay Muqdisho baaqna u diray shacabka